रिलिज पूर्व नै ‘बाहुबली–२’ ले राख्यो यस्ता रेकर्ड. – Sabaikoaawaj.com
रिलिज पूर्व नै ‘बाहुबली–२’ ले राख्यो यस्ता रेकर्ड.
बिहिबार, बैशाख १४, २०७४ 5:46:20 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, १४ वैशाख / ‘बाहुबली– द बिगिनिङ’ रिलिज भएको ६ सय ५८ दिन पछि ‘बाहुबली द– कन्क्लुजन’ रिलिज हुँदैछ । कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे ? यसको जवाफ ‘बाहुबली–द कन्क्लुजन’ हेरेपछि दर्शकले थाहा पाउने छन् । २८ अप्रिल अर्थात शुक्रबार रिलिज हुन लागेको यस सिनेमाले रिलिज पूर्व नै चार वटा रेकर्ड राखिसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, बैशाख १४, २०७४ 5:46:20 PM